Rugby – «Top 6 Aroi Corsair cup 2018» : nomontsanin’ny Cosfa ny ekipa voafantin’i Mayotte | NewsMada
Rugby – «Top 6 Aroi Corsair cup 2018» : nomontsanin’ny Cosfa ny ekipa voafantin’i Mayotte
Voahaja ny lojika teo amin’ny andro voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, “Top 6 Aroi Corsair cup 2018”, vondrona “B”, taranja rugby. Resin’ny Cosfa ry zareo Mahorey.
Nomontsanin’ny Cosfa, tamin’ny isa 67 no ho 7 ny ekipa voafantin’i Mayotte, ho an’ny sokajy “B”, eo amin’ny fiadiana ny “Top 6 Aroi Corsair cup”, taranja rugby. Fihaonana notanterahina, omaly alahady, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Efa nampoizina ihany ny vokatra satria ambany be ny lentan-dry zareo Mahorey.
Tetsy ankilany, nanantombo teo amin’ny tanjaka ny miaramila notarihin-dry Hery sy ry Tojo ary ry Manga. Nisesy ny baolina nentin-tanana, tamin’ity. Vao nanomboka 5 mn monja ny fihaonana dia efa nahatsindry baolina ny miaramila ka nifandimby nahatonga izany, ry Chabal sy ry Gougou ary i Hery.
Teo am-pialan-tsasatra dia efa nitarika tamin’ny isa 45 no ho 0 ny Cosfa. Nanova paikady ry zareo Mahorey, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa ka nampiasa ny “cocotte”. Nahitam-bokany izany satria nahatsindry baolina i Masegosa, teo amin’ny minitra faha-60, izay voatsaran’i Massy Jean-Loup. Nanova taktika avy eo ny miaramila ka nampiasa ny lalao misokatra sy haingam-pandeha. Nitohy ny baolina nentin-tanana, nataon’ny Cosfa.
Teo amin’ny lalaon’ny sokajy “A”, natao tany La Réunion, ny asabotsy lasa teo, resin’ny Etang-Salé, tamin’ny isa 41 no ho 3 ny Highlander Blues Maorisy. Ry zareo Renioney, izay horaisin’ny FTM Manjakaray, etsy Mahamasina, ny alahady 1 avrily ho avy izao. Tsiahivina fa efa samy nahazo fandresena iray avy izany miaraka amin’ny “bonus”, ny FTM Manjakaray sy ny Cosfa, eo amin’ity “Top 6 Aroi Corsair cup”, ity.
Maurice Auguste Benyowsky 25/11/2020